Vanhu vemuKwekwe Vokurudzirwa Kutevedzera Kurudziro dzeKudzivirira Kupararira kweCovid-19
Vaimbova gurukota rezvehutano Doctor Henry Madzorera vanoti vanhu vakawanda muKweke havasi kutevedzera zviri kukurudzirwa nenyanzvi kuti vaite mukudzivirira kupararirwa kwemhando yeCovid-19 iri kuuraya vanhu vakawanda muIndia uye yakatouraya mumwe munhu muguta iri. Mhando yeCovid-19 yekuIndia iyi inonzi B.1.617 variant.
Gurukota rezvehutano vaConstantino Chiwenga vakakurudzira vanhu vemuKwekwe nenzvimbo dzakapoteredza kuti vange vave mudzimba kubva na7 manheru kusvika na6 mangwanani serimwe danho rekuyedza kumisa kupararira kwechirwere ichi.
VaMadzorera vaudza Studio 7 kuti vanhu havasi kupfeka zvivhara miromo nemhino uye vari kuramba vakaungana zvinopa kuti kutapurirwa chirwere kuve nyore.
Asi mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19 munyika Dr Agnes Mahomva vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vanhu havafanire havo kunyanya kuvhunduka nezvekuwanikwa munyika kweB.1.617 variant sezvo hurumende yaita gadziriro yakasimba kuti chirwere chisapararire munyika zvakanyanya.
Asi Dr Mahomva vayambirawo vanhu kuti vasarivare vachiti vanofanira kutevedzera zvose zvinokurudzirwa kuti vadzivirire kutapurirana chirwere ichi.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehutano dzaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yaifanira kuita zvakaitwa nedzimwe nyika zvekurambidza vanhu kuenda kuIndia kana kubva kunyika iyi zvichipinda munyika kanazvisina kukosha zvazviri kufambira. Izvi zvakaitwa nenyika dzakaita seAmerica, Britain, Canada, Germany, Italy nedzimwe.
Zvichakadaro, bazi rezvehutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika nemusi weSvondo zvasiya vanhu vafa kubva zvatanga kupararira chirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1,586.
Vanhu gumi nevashanu vakabatwawo nechirwere ichi nemusi weSvondo zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nemasere zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 38, 679.
Vanhu gumi vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mana nemakumi mana nevashanu kana kuti 36, 445.
Vanhu vachiti kurwara nyika yose mazana matanhatu nemakumi mana nevasere kana kuti 648. Vakawanda vari kurwara ava vari muHarare mune vanhu mazana matatu nemakumi masere nevana kana kuti 384. Vanhu vabayiwa nhomba kekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu zvine mazana mamatatu nemakumi mana nevasere kana kuti 630, 348.
Pavanhu ava, vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa nebazi rezvehutano vave zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nevatau zvine mazana manomwe nemakumi maviri nevashanu kana kuti 273, 725.
Asi hurumende inoti iri kuda kubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Hurukuro naDoctor Henry Madzorera